Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Midnimo ee Xerada Dhagaxley oo kulan isugu yimid
Faraca Midnimo ee Xerada Dhagaxley oo kulan isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ July 31, 2014
Maanta oo khamiis ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 31/7/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka dhacay kulan aad ubalaadhan oo ay isugu yimaadeen intabadan xubnaha faraxa MIDNIMO ee ka howlgala xerada Dhagaxlay. Kulankan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee faraca ayaa ahaa mid sifiican loosoo qaban qaabiyay siwayna looga soo qaybgalay.
Ugu horayna kulanka ayaa furmay abaare 2:00 duhurnimo iyo qadar daqiiqado ah waxaana sidii caadada ahayd lagu furay wacdi diini ah iyo aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah waxaana soo jeediyay sh C/majiid oo kamid ah culimada Faraca Midnimo ahna Hogaanka arimaha Diinta iyo Dabagalka sheekha ayaa siwayn ugu dheeraaday cabsida Allah isagoo xusay in wax kasta laga hormariyo u hogaansanka amarada Allaah uu siinayo adoomadiisa. Sidoo kale sheekha ayaa xusay jihaadka ay umada ree Ogadenia kujirto iyo waajib nimadiisa iyo sida loogu baahanyahay gudashada waajibaadka saaran umada muslimka ah ee soomaalida Ogadenia ee Diintoodii iyo Dalkoodii iyo Dadkoodiiba ay ku habsatay masiibada gumaysigu.
Intaas kadib waxaa madasha laga soojeediyay warbixin dheer oo dal iyo dibadba ah waxaana madasha laga akhriyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Ogadenia waxaa sidoo kale laga warbixiyay xaalada guud ee halganka dibad iyo gudaba waxaana laxusay in uu maanta halganka ay umada ree Ogadenia kujirto uu marayo marxalad aan laloodin karin dhan ciidan iyo dhan siyaasadeedba.
Intaas kadib shirgudoomiyihii oo ahaa gudoomiyaha faraca MIDNIMO ayaa shirka kusoo dhaweeyay qayb kamid ah marti sharaftii shirka fadhiday waxaana hadalkii lagu soodhaweeyay Xoghayaha Faraxa Iftin ee Xagardheere kaas oo khudbad aad udheer oo isugu jirta warbixinta deegaankii uu kayimid iyo guubaaba balaadhan oo uu usoo jeediyay faraca uu martida u ahaa ee Midnimo.
Sidoo kale waxaa khudbado dhaadheer goobta kasoo jeediyay qayb kamid ah hogaamada sida hogaanka arimaha Bulshada iyo qayb kamid ah kaadirka iyo wax garadka faraca oo fikirkooda kasoo jeediyay madasha iyagoo dhamaan xusayay in lasii laban laabo howlaha halganka ee lagu doonayo in lagu xoreeyo ciida Ogadenia si ay shacabka soomaalida Ogadenia ula sinmaan dadka gankooda ah.
Sikastaba ha’ahaateen shirkii ayaa soo gabagaboobay abaare 4:30 galabnimo isagoo kudhamaaday guul iyo wajiyo farxadleh dadkuna ay isku salaamayeen ciid wanaaaaagsan.